﻿	Reuben Sandwich sliders - Ezi Ntụziaka
ka lemon meringue pie kwesiri ka esi esi ya
ihe na-eme na flakes ọka
ebee ka esi enweta ehi na kabeeji n’akụkụ m
esi esi nri Italian toki soseji
kedu ka m ga esi mara mgbe ana eme ihe okike ozugbo
Reuben Sandwich sliders na-eme oriri oriri zuru oke ma ọ bụ nri abalị izu ụka!
Achịcha nri abalị na-ejupụta na ntụ ọka Reuben kachasị amasị gị, tinye ya na nsị buttered na tored ruo mgbe ọkụ ma gbazee. Nke a ga - abụ nri oriri gị!
Ahuru m ihe oma n'anya Reuben Sanwichi . Achịcha rye nke eji ejiji, swiss cheese, na sauerkraut ma sie ya na pan ruo mgbe eghechara ya. Ihe oriri ndị ahụ na-agwakọta nke ọma ma mee sanwichi zuru oke ma ọ bụ ọbụlagodi pasta salad .
Mgbe m hụrụ ezigbo Reuben n’anya, ha abụghị nri kacha mfe ị ga-eme maka nnukwu igwe mmadụ ma ọ bụ oriri…. rue ugbu a bụ! Aga m eme ihe anyị na-eme Ham & Chiiz sliders , ma ọ bụ BBQ Chicken sliders maka nnọkọ mgbe m chere echiche, gịnị ma ị gbanwee ya ntakịrị. Obi dị m ezigbo ụtọ na m mere, ihe ndị a ga-abụrịrị ihe m na-eme mgbe niile na menu m!
Ntụziaka a na-ewere ihe ụtọ ịtụnanya Reuben ị hụrụ n'anya, gbanye ha na mpempe akwụkwọ mmịfe (ma ọ bụ nri abalị) wee sie ha ruo mgbe ha dị ọkụ ma chiiz ahụ gbazee.
A na-ehichapụ elu nke mpịakọta ndị a na buttered seasoned butter na-ewere sliders ndị a site na nnukwu ihe ịtụnanya! Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ ezie na ndị a dị mfe ịkwadebe, enwere ike ịme ha ọtụtụ oge tupu ha agaa (ọbụlagodi tupu ndị ọbịa ọ bụla erute) wee banye n'ime ite ọkụ tupu ha eri nri.
Ọ bụ ezie na ndị a na-eri ezigbo nri oriri na ọ partyụ partyụ, ha na-eri nri ngwụsị izu na ngwa ngwa. Anyị na-efe ha ma ọ bụ n'akụkụ salad ma ọ bụ veggies ma mikpuo maka nri abalị zuru oke n'etiti ọrụ ụlọ na omume! Mymụ m hụrụ ha n'anya ma weghachite ha n'ụzọ zuru oke ma ọ bụrụ na ị ga-enwe obi ụtọ ịnwe ihe fọdụrụ!
More ọkacha mmasị Reuben
Ruben Roll Ups
Sandwich Sandwich M M Hụrụ Na Ya
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ12 sliders Onye edemedeHolly NilssonReuben Sandwich sliders na-eme oriri oriri zuru oke ma ọ bụ nri abalị izu ụka! Achịcha nri abalị na-ejupụta na ntụ ọka Reuben kachasị amasị gị, tinye ya na nsị buttered na tored ruo mgbe ọkụ ma gbazee. Bipute Ntụtụ
▢12 nri abalị na-apụta
▢8 ounce ehi ehi mẹ iphemiphe ọbule
▢8 ounce swiss chiiz
▢⅓ iko puku agwaetiti ma ọ bụ ejiji Russia
▢1 iko sauerkraut afanyekwa akọrọ
▢¼ iko bọta gbazee
▢1 ngaji Fikiere minced yabasị
▢½ ngaji caraway mkpuru nhọrọ
Ghichaa ihe ndi ozo n'ime obere efere.
Bee ihe ndi ozo na nkewa nkewaputa nke elu na ala.
Debe ala nke mpịakọta na pan 9 × 13 (Ana m ede akwụkwọ na akwụkwọ akpụkpọ anụ maka iwepụ dị mfe).
Gbasaa mgbakwasa na mpịakọta. Top na oyi akwa chiiz, sauerkraut, anụ ezi ọka na akwa chiiz ọzọ.
Jiri elu nke ọzọ na-apụta ma jiri nwayọ ngaji ma ọ bụ hichaa ngwakọta butter.
Ime ihe dị ka minit 20-25 ma ọ bụ ruo mgbe chiiz gbazee na elu na-acha ọkụ ọkụ. Na-eje ozi na-ekpo ọkụ.
Calorisị:Ogbe 291,Carbohydrates:22g,Protein:iri na otug,Abụba:17g,Abụba Ajuju:7g,Cholesterol:39mg,Sodium:677mg,Potassium:Ogbe 154mg,Eriri:abụọg,Sugar:abụọg,Vitamin A:Ogbe 290IU,Vitamin C:7.2mg,Calcium:Ogbe 233mg,Iron:2.2mg
IsiokwuSanwichi achicha N'ezieOriri Nri Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .